1 Yosua wu+ akyi no, Israelfo bisaa+ Yehowa sɛ: “Yɛn mu hena na obedi kan ne Kanaanfo akɔko?” 2 Ɛnna Yehowa kae sɛ: “Yuda na ɔbɛkɔ.+ Hwɛ, ɔkwan biara so, mede asase no bɛhyɛ ne nsa.” 3 Na Yuda ka kyerɛɛ ne nua Simeon sɛ: “Wo ne me nkɔ asase a me nsa kae no so+ na yɛne Kanaanfo nkɔko, na me nso me ne wo bɛkɔ w’asase so.”+ Enti Simeon ne no kɔe.+ 4 Afei Yudafo no kɔe, na Yehowa de Kanaanfo ne Perisifo hyɛɛ wɔn nsa,+ na wodii asraafo mpem du so nkonim wɔ Besek. 5 Na bere a wohuu Adoni-Besek wɔ Besek no, wɔne no koe, na wodii Kanaanfo+ ne Perisifo+ so nkonim. 6 Afei Adoni-Besek guanee, na wotiw no kɔkyeree no twitwaa ne nsa kokurobeti ne ne nan kokurobeti. 7 Ɛnna Adoni-Besek kae sɛ: “Mitwitwaa ahene aduɔson nsa kokurobeti ne wɔn nan kokurobeti, na wɔtasetasee me pon ase aduan. Nea meyɛɛ wɔn no, Onyankopɔn ayɛ me bi atua ka.”+ Ɛno akyi no, wɔde no baa Yerusalem,+ na owui wɔ hɔ. 8 Afei Yudafo ne Yerusalem+ kɔkoe, na kurow no bedii wɔn nsam. Na wɔde nkrante kunkum ɛhɔfo de ogya hyew kurow no. 9 Ɛno akyi no, Yudafo ne Kanaanfo a wɔte bepɔw so ne Negeb+ ne Sefela+ kɔkoe. 10 Afei Yudafo no kɔɔ Kanaanfo a wɔte Hebron+ no so. (Bere bi na wɔfrɛ Hebron sɛ Kiriat-Arba.)+ Na wokum Sesai ne Ahiman ne Talmai.+ 11 Wofi hɔ kɔɔ Debirfo so.+ (Bere bi na wɔfrɛ Debir sɛ Kiriat-Sefer.)+ 12 Afei Kaleb+ kae sɛ: “Nea obetumi ako afa Kiriat-Sefer no, mede me babea Aksa+ bɛma no aware.”+ 13 Ɛnna Kaleb nua kumaa+ Kenas+ ba Otniel+ kɔko fae, enti ɔde ne babea Aksa maa no waree.+ 14 Na ɔbea no rekɔ fie no, osii so ka kyerɛɛ ne kunu sɛ ommisa asase mfi ne papa nkyɛn. Afei bere a Aksa te afurum so no, ɔbɔɔ ne nsam frɛɛ ne papa.+ Ɛnna Kaleb bisaa no sɛ: “Dɛn na wopɛ?” 15 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, hyira me.+ Asase a ɛda anafo na wode maa me, enti fa Gulot-Maim* ma me.” Na ɔde Gulot Atifi+ ne Gulot Anafo maa no. 16 Na Mose asebarima+ a ɔyɛ Kenini+ no mma ne Yudafo fi mmɛ kurow+ no mu baa Yuda sare a ɛwɔ Arad anafo no so.+ Na wɔne ɛhɔfo kɔtenae.+ 17 Afei Yuda ne ne nua Simeon kɔtow hyɛɛ Kanaanfo a wɔte Sefat no so, na wɔsɛee kurow no pasaa.+ Enti wɔtoo kurow no din Horma.+ 18 Akyiri yi, Yuda ko faa Gasa+ ne ɛho nsase, Askelon+ ne ɛho nsase, ne Ekron+ ne ɛho nsase. 19 Yehowa kɔɔ so dii Yuda akyi, na ɔfaa nsase a ɛwɔ bepɔw so no, nanso wantumi ampam wɔn a wɔtete asasetaw no so no, efisɛ na wɔwɔ nteaseɛnam+ a wɔde nnade ayɛ.+ 20 Bere a wɔde Hebron maa Kaleb sɛnea Mose kae no,+ ɔpam Anak+ mma baasa no fii hɔ. 21 Na Benyaminfo no ampam Yebusifo a wɔte Yerusalem no,+ na Yebusifo no kɔɔ so ne Benyaminfo tenaa Yerusalem de besi nnɛ.+ 22 Yosef fiefo+ nso kɔɔ Betel so,+ na Yehowa dii wɔn akyi.+ 23 Na Yosef fiefo no wiaa wɔn ho kɔhwɛɛ+ Betel. (Kan no na wɔfrɛ kurow no Lus.)+ 24 Na wɔn a wɔsomaa wɔn no huu ɔbarima bi sɛ ofi kurow no mu reba. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛsrɛ wo, kyerɛ yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so akɔ kurow no mu, na yɛne wo bedi no adɔe so.”+ 25 Na ɔbarima no kyerɛɛ wɔn ɔkwan a wɔbɛfa so akɔ kurow no mu. Na wɔde nkrante kokunkum kurom hɔfo,+ na wogyaa ɔbarima no ne n’abusuafo nyinaa.+ 26 Afei ɔbarima no kɔɔ Hitifo+ asase so kɔkyekyee kurow bi too hɔ din Lus. Saa na wɔfrɛ hɔ de besi nnɛ. 27 Na Manase+ amfa Bet-Sean+ ne Taanak+ ne ɛho nkurow, ne Dorfo+ ne Yibleamfo+ ne Megidofo+ ne nkurow a atwa wɔn ho ahyia no. Kanaanfo no kɔɔ so tenaa asase yi so.+ 28 Afei Israelfo no ho bɛyɛɛ den,+ na wɔmaa Kanaanfo no yɛɛ nkoadwuma,+ na wɔantu wɔn amfi hɔ koraa.+ 29 Efraim nso ampam Kanaanfo a wɔte Geser no amfi hɔ, na mmom Kanaanfo no kɔɔ so ne wɔn tenae wɔ Geser.+ 30 Sebulon+ ampam Kitronfo ne Nahalolfo+ no, na mmom Kanaanfo yi kɔɔ so ne wɔn tenae,+ na wɔma wɔyɛɛ nkoadwuma.+ 31 Aser+ ampam nnipa a wɔte Ako ne Sidon+ ne Ahlab ne Aksib+ ne Helba ne Afik+ ne Rehob+ no. 32 Enti Aserfo no kɔɔ so ne Kanaanfo a wɔwɔ asase no so no tenae, na wɔampam wɔn.+ 33 Naftali+ nso ampam nnipa a wɔte Bet-Semes ne Bet-Anat+ no, na wɔkɔɔ so ne Kanaanfo a wɔwɔ asase no so no tenae,+ na wɔde nnipa a wɔte Bet-Semes ne Bet-Anat no yɛɛ nkoadwuma.+ 34 Amorifo no kaa Danfo+ no hyɛɛ bepɔw no so, na wɔamma wɔansian amma asasetaw no so.+ 35 Enti Amorifo no kɔɔ so tenaa Bepɔw Heres so ne Ayalon+ ne Saalbim.+ Nanso Yosef fiefo nsa yɛɛ den wɔ wɔn so, na wɔde wɔn yɛɛ nkoadwuma.+ 36 Na Amorifo hye no fi Akrabim+ koko so, na efi Sela foro kɔ atifi fam.
Ase ne “baabi a nsu wɔ.”